SULTAN NKE SOKOTO ENYELA NDI NCHỊ EHI ỌNWA ABỤỌ IJI CHỌPỤTA NDI NA-EGBU NDI MMADỤ NA NAIJIRIYA – hoo!haa!!
Onye isi ndi ụka Alakụba n’ala anyị niile, bụ Muhammad Sa’ad Abubakar, Sultan nke Sokoto enyela ndị nche ehi akpọrọ Miyetti Allah Cattle Breeders’ Association nke Naijiriya, (MACBAN), iwu, ka ha jiri ọnwa abụọ chọpụta ndi nche ehi na-egbu ndi mmadụ na obodoa bụ Naijiriya.
Onye Sultan a nyere iwua ụnyahụ mgbe ana-edu ndi isị ọhụrụ nke ndi otu MACBAN n’iyi ọrụ na Sokoto.
Onye isia gara n’ihu gwa ndi ndua ka ha sie imi n’ala chọpụta n’ezie ndi bụ ha na-egbu ụmụ mmadụ ka-ana-egbu ọkụkọ n’ala anyị niile gbaa gburugburu.
Ọ kwara arịrị ka esi buru ogbugbu ana-egbu ndi ala anyi bokwasa ndi Fulani n’isi.
Ọ gwara ndi ndu ahụ mkpa ọ dị, ịmara na ọrụ chere ha n’ihu adịghị mfe, ma kwukwa ka-amatakwa na-ana-egbukwa ma ndi Fulani n’onwe ha. Ọ sịrị na-ọdị nwute na ndi mgbasa ozi anaghị eme ka ndi mmadụ mata nkea.
Sultan sịrị, etu o sina dị, anyị na-enye unu ọnwa abụọ igagharị gburugburu Naijiriya ma chọpụta ihe mere eji ebo ndi Fulani ebuboo ogbugbu ana-egbu ndi mmadụ na Naijiriya. Ọ sịrị ha ‘gaanụ ma chọpụta ndi na-egbu ndi mmadụ ahụ ana-ebo ndi Fulani’, ọ gara n’ihu gwa ha na-achọrọ imata nke bụ eziokwu n’ime ọnwa abụọ.
Ọ sịrị na-onweghị mgbe ọ na-eme ha ihere na ha bụ ndi Fulani maka na-ejighị ime nsogbu mara ndi Fulani, na-agbanyeghị na ihe ojọọ ọbụla mere n’ala anyị, ebo ya ndi Fulani.
Sultan sịrị na-ọdị mkpa ka ndi mmadụ mara na-enwere ike nwee ndi ajọ Fulani, dịkwa ka esi nwee ndi ajọ mmadụ na agbụrụ ndi ọzọ. Ọ sịrị na-ọ bụghị nkea ka aga-eji were na-ọbụ ndi Fulani na-eme ihe ọjọọ niile ana-eme n’ala anyị
Previous Post: NNUKWU ỌKWA DỊ MKPA MAKA NDỤ GỊ!!!
Next Post: MASSOB EKWUELA OKWU MAKA MKPỌ IKIKERE NDI ỤLỌ OMEBE IWU EBUURU N’IKÉ